U-Kate Moss uhlukanisa nomyeni wakhe?
Umshado we-supermodel eneminyaka engu-41 ubudala uK Kate Moss nomculi oneminyaka engu-46 ubudala we-rock band "The Kills" uJamie Hins ngasekupheleni kokuwa. Ngokusho kwamahemuhemu, abahlonishwayo sebevele banquma ukuhlukanisa izindlela futhi ngokushesha maduzane bezomemezela ngokusemthethweni isehlukaniso. Ngokwezihlobo ezivamile zalabo bobabili, okukhulunywe yi-British tabloid I-Sun, ubudlelwane phakathi kwalabo abashade bafa, kanti ama-Hins alinda kuphela ukuthi uMoss afake isicelo sokuhlukanisa. U-insider utshele iphephandaba ukuthi lo mdwebo kanye nomculi abazange bakhulume ngemuva kwezihlamba eziningana ezinkulu.
"Asisekho umbhangqwana oshadile," kusho umthombo osondelene nalo mbhangqwana. "UJamie ulindele uK Kate ukuba afake isahlukaniso." Nakuba bengasheshe, bobabili bayaqonda ukuthi kuzodingeka benze isitatimende esisemthethweni. Kodwa manje abafuni ukuheha ukunakekelwa okwamanje. "
Izindaba zakamuva mayelana nesehlukaniso Kate Moss noJamie Hins bavele nje kuphela, kodwa izinkinga emndenini wezinkanyezi zaqala ekuqaleni. Kubikwa ukuthi ubuhlobo bomshado buye bahlabeka kakhulu kangangokuthi bazama ukugwema futhi bangabonakali ngesikhathi esisodwa endaweni eyodwa. Bahlale bephikisana futhi, ngokusobala, abanandaba nokugcina umshado. Manje ngamunye wabo unokuphila.
Isizathu sesehlukaniso ngu Kate Moss noJamie Hins
U-Kate Moss noJamie Hins batshalwa ngoJulayi 2011. Ekuqaleni kwakubonakala sengathi emndenini wabantu abadumile konke kwakuhamba kahle, kodwa futhi emishadweni yabo bathola imfucumfucu. Isizathu sokuphikisana kwakuyi-banal umhawu ngecala le-model.
UK Kate wayenzima ukuveza abanye besifazane abazungezwe ngumyeni wakhe, kanti ubuhlobo obuseduze noJamie obuseduze nobungonyama beMary Mary Charteris bekugcineni bathatha uMoss ngaphandle kwakhe. Manje umculi ukhuluma kakhulu noCharteris nomyeni wakhe, umculi weBig Pink band uRobbie Ferzem. Futhi uMoss akayithandi kakhulu. Njengoba kwenzeka, kukhona ukungathandi okude phakathi kukaKate noMariya. Esikhathini esithile esidlule, babe nomhawu ngomyeni nomunye futhi ngezikhathi ezithile babelana ngamazwi okubambisana emaphephandabeni.
Ngokushesha u-guitarist uvakashela i-America, ngemuva kwalokho, lo mbhangqwana, ngokusobala, uzokwenza isinqumo sokugcina.
U-Anastasia Volochkova washaqeka isithombe seNatasha Koroleva osekhulile futhi ekhulile
U-Irina Bilyk waba ngu-transvestite, isithombe
Abahlanganyeli abafile bephrojekthi "Dom-2". Izinhlekelele eziyisithupha, Izithombe namavidiyo
U-Tatiana Navka wabika ukukholwa kukaNdodakazi yakhe encane
U-Alsou wazala umfana
Umyeni ka-Xenia Borodina wayehleka ngenxa yesithombe esingavamile
U-Alla Pugacheva esikhwameni esifushane wabangela ukuhlambalaza kwe-Inthanethi, isithombe
Isobho nge-cheese ecibilikile kanye ne-curry
Isitembu kule pasipoti sishintsha kakhulu?
I-Chanterelles ebusika - zokupheka zokupheka - i-caviar, ebhotela, ethosiwe ku-margarine. Indlela yokwasawoti nokufisa ama-Chanterelles ebusika
I-pizza ku-microwave ne-grill
Imibala ibiza ngokuthi: TOP-4 izithelo zentsuku zezindebe
Izimo zobulili ezinamahloni ezinhlanu: indlela yokuthola indlela yokuphuma
Ngingaba kanjani neqembu le-bachelorette?
I-Pasta "Gnezdyško" nge-mozzarella ne-parmesan ushizi
Uzoxoxa kanjani ngesikhashana ngocansi ngesikhatsi futhi nini
Abadlali be-basketball abadume kakhulu emhlabeni
Isinkwa sePippi Pete
Yiziphi izindlela zokuvimbela ukubeletha ezithembeke kakhulu?
Ushizi ekudleni kwengane
Lancôme Énergie de Vie for isikhumba shiny
Kuletha ingcebo nenhlanhla